हामी अब एप्पल समाचारमा उपलब्ध छौं! | Martech Zone
बुधबार, मार्च 16, 2016 Douglas Karr
ठिकै छ, मोबाइल ढाँचाहरु रोल आउट गर्न जारी राख्छन् - Google एएमपी प्रक्षेपणको साथ, फेसबुक खोलिएको तत्काल लेख, र एप्पलले एप्पल समाचार खोल्दै! हामीले साइटमा हाम्रो एएमपी एकीकरण पूरा गरिसकेका छौं, इन्स्टन्ट लेखमा अनुमतिका लागि फेसबुकमा पेश गरिएको, र हामी एप्पल समाचारमा स्वीकृत भएको घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छौं!
यदि तपाईं मोबाइल उपकरणमा हुनुहुन्छ भने, तल दिइएको समाचार बटन क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईं हाम्रो लेखहरू पढ्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यी ढाँचाहरू अनुभव अनुकूलित छ सुनिश्चित गर्न प्रत्येक प्लेटफर्मको लागि विशिष्ट छन्। यदि तपाईं प्रकाशक हुनुहुन्छ र तपाईंको सामग्री एप्पल समाचारमा उपलब्ध गराउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ समाचार प्रकाशकमा साइन अप गर्नुहोस् आईक्लाउडमा।
यदि तपाइँ वर्डप्रेस चलाइरहनुभएको छ भने, तपाइँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ एप्पल समाचारमा प्रकाशित गर्नुहोस् WordPress प्लगइन एकचोटि तपाईंले प्रोग्रामको लागि आवेदन गर्नुभयो र प्लगइन स्थापना गर्नुभयो भने, तपाईं अनुमोदन हुनुहुनेछ र केहि कथाहरू बुझाउन सोध्नुहुनेछ। प्लगइनलाई तपाईंले केही भर्नु आवश्यक छ एपीआई सेटिंग्स, र त्यसपछि तपाईं कथाहरू सबमिट गर्नुहोस्। तपाइँ अर्को ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ यदि तपाइँ अनुमोदित हुनुभयो र त्यहाँबाट बाहिर, तपाइँका लेखहरू स्वचालित रूपमा समाचारमा प्रकाशित हुनेछन्।
ब्लुब्रिजबाट हाम्रो अद्भुत मोबाइल अनुप्रयोगको साथ, हामी पाठकहरूको निरन्तर बृद्धि र मोबाइलको माध्यमबाट हामी स see्लग्नता पाउँदा उत्साहित छौं। मोबाइल रिडरशिप कुनै पनि अन्य माध्यमको तुलनामा धेरै छिटो बढ्दैछ - त्यसैले यो आवश्यक छ कि तपाईं आफ्नो सामग्रीको पहुँच विस्तार गर्न यी उपकरणहरूको फाइदा लिनुहोस्!
टैग: स्याऊएप्पल समाचारएप्पल समाचार प्रारूपएप्पल समाचार प्रकाशकiOSआइओएस समाचार
स्किमलिंक्स डाटा प्रदायक चेकलिस्ट - सही प्रश्नहरू सोध्दै